ခေါင်းစဉ် - ကလေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကိုယ့်ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကိုကြည့်ရခြင်းမှာ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများသည်ကလေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အကူအညီနှင့်အကြံဉာဏ်များပေးသွားပါမည်။
ဒေါသထွက်ပြီးဝုန်းဒိုင်းကြဲမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အကြံပြုချက်များ
(၃)နှစ်နှင့်(၃)နှစ်အထက် အရွယ်ကလေးများ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
တစ်၊ နှစ်၊ သုံး! ကလေးများအား ကိန်းဂဏန်းများကို သင်ကြားပေးခြင်း
ကလေးများ၏စိတ်ခံစားချက် စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ် အကြံပေးချက်များ
ရယ်မောခြင်းသည် ကလေးများ၏ စိတ်နှင့်ခန္ဓာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သည်။
ကလေးများ၏ ကူညီတတ်သောအပြုအမှုများကို မည်သို့ပျိုးထောင်ပေးမည်နည်း။
ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့ သားသမီးလေးတွေ ပျိုးထောင်ဖို့ မေမေ သိသင့်တဲ့ (၆) ချက်
ကလေးတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုကို အမြင်ချင်ဆုံးက ဖေဖေမေမေတို့ပါပဲ။ စာမေးပွဲတို့ ပြိုင်ပွဲတို့ဆို ကာယကံရှင်လေးတွေထက် မိဘတွေက ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားတတ်ကြတာပဲကြည့်။ ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေကို ပညာတော်စေချင်တာ၊ ထိပ်ဆုံး ရောက်စေချင်တာ မိဘတိုင်း ရဲ့ ဆန္ဒပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် မေးစရာရှိတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကပညာရေးမှာ အဆင့်တစ်ရရုံနဲ့ ထူးချွန်အောင်မြင်တယ်လို့ ယူဆနိုင်ပြီလား?
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့အတူ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကလည်း ကလေးတွေအတွက် အရေးပါပါတယ်
မိမိကလေးကို အကောင်းဆုံး မကြီးပြင်းစေချင်တဲ့ မိဘ ဘယ်မှာ ရှိလိမ့်မလဲ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကလေးကို အကောင်းဆုံး ဂရုစိုက်ပေးချင်တဲ့ မေမေ ဖေဖေတို့ အတွက် ဗဟုသုတရမယ့်အချက်လေးတွေ‌‌‌‌‌‌ ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ဖေဖေ မေမေတို့က ဘာကို သတိလက်လွတ် ဖြစ်နေတာလဲ? ကလေး တစ်ယောက် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုရင် ဖေဖေ မေမေတို့ ဘာကိုအရင်ဆုံးပြေးမြင်မိလဲ? သန်သန်မာမာ ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းနဲ့ ပြေးလွှားဆော့ကစားနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ပြေးမြင်မိလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတွက် အစားအသောက်ကို ကောင်းကောင်းကျွေးမယ်၊ အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် ဂရုစိုက်မယ်။ ကလေးက ပိန်နေလား၊ ဝနေရဲ့လား ပုံမှန်ရော ထွားရဲ့လား ဆိုတာတွေကို သတိထားမယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကိုသတိလက်လွတ် ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပဲ အရမ်းသတိထားဂရုစိုက်မိနေတဲ့အခါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ပြုစုပျိုးထောင်ရမှာတွေကိုတော့ မေ့နေတတ်တယ်။
အဆင့်ဆင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကလေးတစ်ယောက်(Progressive Kid) ဖြစ်လာစေဖို့
Online Class မှာ ကလေးတွေ ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်စေဖို့
Online Class တွေတက်တဲ့အခါ သားသားမီးမီးတို့ သင်ခန်းစာတွေကို ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်စေဖို့
ကလေးအကြောင်းအရာများမှ နောက်ထပ်အကြံပြုချက်များကို လေ့လာရန်။
Careline ကို မေးမယ်
Dugro Careline (0997777 6666) ကို နေ့စဉ်မနက် (၈)နာရီခွဲမှ ညနေ (၅)နာရီခွဲအတွင်း သိလိုရာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Facebook ကနေ စကားပြောမယ်
0997777 6666 ကိုဖုန်းခေါ်မယ်